सभामुख बन्दै गरेका अग्नि सापकाेटाका बारे राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पाैडेलले गरे यस्तो खुलाशा! (भिडियाे हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > अन्तर्वार्ता > सभामुख बन्दै गरेका अग्नि सापकाेटाका बारे राजनैतिक विश्लेषक आनन्दराम पाैडेलले गरे यस्तो खुलाशा! (भिडियाे हेर्नुस्)
यतिबेला नेपालको राजनैतिक परिवेश विभिन्न कारणहरूले तातिएकाे छ । नेपालमा विभिन्न काण्डहरू घटिरहेका बेला फेरि नेपालमा भएकाे केहि राजनैतिक घटनाक्रममा विश्लेषकहरूले विभिन्न् कोणबाट बिश्लेषण गरिरहेका छन् । मुख्यतय यतिबेला सभामुखको बिषयलाइ लिएर विभन्न आँकलनहरू गरिएकाे छ । नेपालका सभामुख कृष्णबहादुर महारा रोशनी काण्डमा परेपछि बला त्कार घटनामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएकाे छ भने केशमा मुछिनासाथ महराले राजिनामा दिए ।
महराले नैतिकताका आधारमा राजिनामा त दिए, तर सभामुखमा नेपालकाे संवैधानिक कानुनतः एउटै दलबाट हुन नहुने प्रवाधानका कारण सरकार पक्षिय दलबाट उपसभामुख रहनुभएकि डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेलाइ राजिनामा दिएर बाटो खोल्न लगाइयो । उपसभामुख तुम्बाहम्फेले राजिनामा नदिएपछि दल भित्रै विभिन्न चरणमा बार्ता हुदै खैलाबैला मच्चियो अन्ततः दलले सभामुखका लागि अग्नि सापकाेटालाइ सभामुख बनाउने निर्णयसँगै उपसभामुख डा. तुम्बाहम्फेले राजिनामा दिइन ।
दलका तर्फबाट अघि सारिएका सभामुख उमेदवार अग्नि सापकोटा काँग्रेसले उमेदवारी नदिएपछि निर्विरोध त चयन भए तर अग्नि सापकोटा ज्यानमुद्धामा रहेको भन्ने कुराले फेरि नेपाली रानैतिक परिवेश तातिएकाे छ । कुरा मात्रै होइन केहि मिलेर अग्नि सापकाेटा बिरूद्ध सर्वोच्वमा रिट नै दायर गरेका छन् ।
यसै बिषयलाइ लिएर राजनैतिक बिश्लेषक आनन्दराम पाैडेलसँग नियात्रा टिभीका रतन चन्दले समसामयिक विषयलाइ लिएर कुराकानी गर्नुभएकाे छ । उक्त कुराकानीमा विश्लेषक पाैडेलले सभामुखका बारेमा यस्तो रहस्य खोल्नुभएका छ । उहाँका अनुसार राजनैतिक पृष्ठभुमि जतिसुकै बलियो भए पनि सभामुख जस्तो सँवैधानिक उच्च पदमा निर्वाचित हुने मान्छे स्वच्छ छवि भएकाे हुनुपर्ने बताउनु भएकाे छ । दलमा यतिका मान्छेहरू सक्षम हुदाहुदै मान्छे नै नभएको जसरी ज्यानमुद्दा लागेका अग्नि सापकाेटालाइ नै सभामुख बनाउनु दलकै बेइज्जती भएकाे बताउनु भएकाे छ ।
यतिबेला जनताकाे आवाजकाे हवला दिदै विश्लेषक पाैडेलले भन्नुहुन्छ – यतिबेला नेपाली राजनैतिक बजारमा एउटा उखान बदलिएकाे छ, सबैले भन्छन बलात्कारी गए ज्यानमारा आए । अरू बाँकी के के भने भिडियोमै हेर्नुहाेस ।
आखिर किन छात्तीभरि यस्तो ट्याटु खोपेर विदेश उडे क्याप्टेन विजय लामा ? (भिडियो)